दुब्लो पातलो शरीरलाइ कसरी बलियो बनाउने? – दैनिक नेपाल न्युज
दुब्लो पातलो शरीरलाइ कसरी बलियो बनाउने?
तपाई आफ्नो शरीरलाई बलियो तागतबर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले उच्च मात्रामा क्यालोरी खाना खानुपर्ने हुन्छ यदि तपाइले दिनमा १५०० क्यालरी र ५० ग्राम प्रोटिन खानु भयो भने तपाईमा बदलाव देखिने छ ।
शरिर वृद्धि गर्नका लागि शरीरलाई चाहिने आधारभूत आब्श्यक्ता भनेको क्यलोरी र प्रोटिन हो । यदी तपाईंलाई क्यालोरी कहाँबाट पाउँछ कुन खानाबाट पाउँछ भन्ने बारे थाहा छैन भने नआतिनुहोस म बताउदैछु । लौ भिडियोमा हेर्नुहोस् ।
कतारमा मृत्यु भएका श्रीमान्को शव कुर्दै सम्झना